नेपाल आज | पहिलो यौनसम्पर्कको जोखिम
आइतबार, १५ भदौ २०७६ गते प्रकाशित - नेपाल आज(PO)
डा. दिनेश बाँस्तोला । नेपाली समाज जति आधुनिकतातर्फ दौडिएको देखिए पनि यौनको मामिलामा अझै अनुदार नै छ । यौन शिक्षा छैन बराबर नै छ अहिले पनि । न विद्यालयमा यसबारे कुनै चर्चा हुन्छ न घरमा कसैले यसबारे केही बताउँछन् । त्यसैले कतिपय राजीखुसीमा, कानुनअनुसार पनि यौन सम्बन्धका लागि योग्य भइसकेका जोडीलाई यौन सम्पर्कमा बारेमा साधारण जानकारीसमेत नभएको पनि पाइन्छ ।
ज्ञानको अभावमा शारीरिक तथा मानसिक दुवै रुपमा पीडादायी हुन सक्छ । तनाव हुनसक्छ । पुरुषमा शीघ्रपतन, लिंग योनिभन्दा बाहिरै रहने हुनसक्छ । जथाभावी यौन सम्पर्क गर्दा महिलाको योनी दुख्ने, घाउ लाग्ने पनि हुनसक्छ । पहिलो रंगीन सम्बन्ध क्लाइमेक्समा नपुग्ने समस्या पनि हुनसक्छ । पहिलो यौन सम्बन्ध आनन्दमयी नभई पीडादायी हुँदा त्यसको नकारात्मक असर पछिसम्म पर्नसक्छ । स्नतको मुन्टो संवेदनशील र नरम हुन्छ । स्तन बिस्तारै खेलाउँदा आनन्द आउँछ । स्तनको मुन्टो (निप्पल) बेस्सरी समात्दा रमाइलो हैन, पीडा हुन्छ र घाउसमेत हुनसक्छ ।
पहिलो पटक यौन सम्पर्क गर्दा यौन शिक्षाको अभाव तथा यौन प्रक्रिया नपुगेका कारणले यौन जोडीमा तनाव उत्पन्न हुनसक्छ । महिलाले मनको कुरा व्यक्त गर्न चाहँदैनन् । त्यसैले यौन सम्पर्कमा सरिक हुनुअगाडि यौन शिक्षा, यौन र यौन क्रिडाका बारेमा ज्ञान लिनु आवश्यक हुन्छ । यौन सम्पर्क गर्नुभन्दा पहिले यौन सम्पर्क गर्ने उचित स्थान र समय निर्धारण गर्नु पर्छ । एकान्त, शान्त तथा सुरक्षित ठाउँ रोज्नु सबैभन्दा उत्तम हुन्छ ।
सम्बन्ध भएपछि के गर्ने?
पहिलो पटक यौन सम्पर्क गरिसकेपछि अनुहार रातो–पीरो हुन्छ । लिपिस्टकका डाम चुम्बनका र्याल अनुहारमा हुन सक्छ । योनिमा झरेको वीर्य चिप्लो र टाँसिने प्रकृतिको हुनाले महिलाको दुवैतर्फको तिघ्रामा बग्न थाल्छ । योनिबाट वीर्य बाहिर निस्कन्छ । त्यसैले यौन सम्पर्क गरिसकेपछि यौनाङ्ग सफा गर्नुपर्छ । मुख धुनुपर्छ नभए राम्रोसँग पुछ्नु पर्छ ।
पहिलो पटक यौन सम्पर्क गर्दा योनिको डल्लो फुल्ने, सुन्निने, रातो हुनुका साथै दुख्ने भएकाले संक्रमणसमेत हुन सक्छ । त्यस्तो समस्या भएमा चिकित्सकको सल्लाहमा उपचार गर्नुपर्छ । पुरुषको पनि लिंगको छाला सुर्किएर दुख्ने तथा सुन्निन सक्छ यस्तो समस्या भएमा चिकित्सकको सल्लाहमा उपचार गर्नुपर्छ । यो समाचार शुक्रबार साप्ताहिकबाट लिइएको हो ।